I-Brucite yindlela yeiminerali ye-magnesium hydroxide - ividiyo
Thenga i-brucite yendalo kwivenkile yethu
I-Brucite yeyona mineral form ye-magnesium hydroxide, kunye nefomula yekhemikhali Mg (OH) 2. Yimveliso eguqukayo eqhelekileyo ye-periclase kwimarble, i-hydrothermal vein yamandla asezantsi enobushushu kumamestones amiswe ngeethamorphosed kunye ne-chlorite schists, kwaye yenziwa ngexesha le-Sninization ye-dunites. I-Brucite ihlala ifumaneka ngokudibana nenyoka, i-calcite, aragonite, dolomite, magnesite, hydromagnesite, ubugcisa, i-talc kunye ne-chrysotile.
Yamkela isakhiwo se-CdI2-esifana ne-hydrogen-bond phakathi konwebu.
UBrucite waqala wachazwa ngo-1824, kwathiwa igama lakhe ngu-Multalogd Bruce (1777-1818). Uhlobo lwe-fibrous lubizwa ngokuba yi-nemalite. Kwenzeka ngemicu okanye iiliti, zihlala zihamba kunye, kodwa ngamanye amaxesha zikhombisi zekristali.
Indawo ephawuleka e-US yiMigodi yeCh Chrome yeWood, iCarl Hill Quarry, iLancaster County, ePennsylvania. Brucite ophuzi, omhlophe noblowu kunye nemikhwa ye-botryoidal wafunyanwa eQila Saifullah kwiSithili sePhondo iBaluchistan, ePakistan. Kwaye emva koko kwafunyanwa kamva iBrucite yenzekile eBela Ophiolite yaseWadh, kwiSithili saseKhuzdar, kwiPhondo leBaluchistan, ePakistan. Eli litye likwakhona livela eMzantsi Afrika, e-Itali, Russia, Canada, nakwezinye iindawo kodwa ezona zinto zifunyanisiweyo yimizekelo yase-US, yaseRussia neyasePakistan.
Intsingiselo ye-Brucite, amandla, izibonelelo, ukuphilisa kunye nepropathi yomfanekiso
IBrucite iza kukunceda ngeendlela ezininzi kubandakanya:
Kuyaziwa ukuba neepropathi ezifanelekileyo zokuphilisa kubandakanya ukunceda ukulawula ubushushu bomzimba.
Ezi zimbiwa zixutywa ziquka amandla anokuthi ancede umzimba ukujongana ne-alkalinity egqithisileyo.
Inokunceda iingxaki zamathumbu kwaye incede ekunciphiseni imithambo ye-furred.
Kuyaziwa ngokuncedisa ekuqunjeni nasekuncedeni iingxaki ngaphakathi kwezihlunu ngokwandisa amandla kunye nokuqina.
IBrucite ikwabizwa ngokuxhasa ukuphiliswa kwamathambo ophukileyo kwaye iyaziwa ukunciphisa i-neuralgia kunye nentlungu edibeneyo.
Ngesenzo sayo sokuvula i-chakra yesithsaba kuthiwa ukunciphisa iintlungu zentloko kunye ne-migraine. Sebenzisa isithsaba se-chakra ukuphakamisa imimoya yakho, ukuphucula ukucinga kwakho kunye nokuphucula imeko yakho.
I-Brucite ine-vibration esebenzayo enokukunceda ukuba utyhile ukuba imeko obandakanyeka kuyo ikwimfuno yakho.
Kwabo banobudlelwane bobuqu apho uziva ngathi akusekho kulunge kuwe kwaye mhlawumbi isiphelo siyeza, amandla eli litye anokukunceda ukuba uthathe isigqibo malunga nenyathelo ofanele ukulithatha.
IBrucite, evela ePakistan
Senza ubucwebe bezinto ezenziwe ngobucwebe njenge-ring, umgexo, amacici, isongo kunye ne-pendant.